Fampiasana fakantsary ala amin'ny vatan'ny Indostria | Vahaolana OMG
Fampiasana fakantsary ala amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny indostria
Ny fakan-tsary mitafy vatana dia hita fa fomba iray hamahana ny olana sy hanatsara ny fampiharana ny lalàna amin'ny ankapobeny. Ny fanavaozana, izay azo apetraka amin'ny masomaso ofisialy na faritry ny tratra, dia manome data tsy miova rehefa ampiasain'ny tompon'andraikitra amin'ny fiambenana na andraikitra samihafa izay mifandray amin'izy ireo amin'ny tambajotra. Horonan-tsary na horonan-tsary (BWV), antsoina hoe fakan-tsary na fakan-tsary azo zahana dia rafitra firaketana feo, horonantsary, na fakana sary.
Na dia mahazatra ny fampiharana ny lalàna sy ny fitantanana ny krizy aza, ny fakantsary manana vatana dia manana fampiasana be dia be ary mety manaporofo mahasoa ao anatin'ny sehatry ny indostria maro, ohatra:
Serivisy herinaratra, Gas ary Saniteraly
Fitantanam-bola sy fiantohana ary tena trano
ny fampiharana ny lalàna
Nieritreritra angamba ianao fa ny fehin-tsary misy fakan-tsary dia voafetra amin'ny fampiasan'ny polisy sy ny mpiambina nefa tsy tena marina izany. Ity lahatsoratra ity dia manadihady momba ny antsipiriany ary manamarika ny fomba, ary inona ny indostria mampiasa ireo fakan-tsary vita amin'ny vatana ho tombontsoany. Inona no ho eo amin'ny fanenjehana sy ny fampiasàn'izy ireo amin'ny fampiasana teknolojia? Azo heverina ho toy ny faran'izay maoderina amin'ny fampidinana tombom-barotra amin'ireo indostria ireo?
Fakan-tsary miakanjo vatana - sombin-tsasatra Tech miakatra:
Tsy ny fakan-tsary miakanjo fotsiny no manome fanampiana ireo masoivoho mpampihatra lalàna fa manana ny fampiasana hafa koa izay mety ho tsy fantatray. Ny fakan-tsary mifono vatana dia heverina ho toy ny haitao ara-teknolojia izay ho lasa ampahany manan-danja amin'ny saika isaky ny indostria. Ilaintsika ny mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny cams vita amin'ny vatana isaky ny indostria ahafahana manaiky tanteraka ity teknolojia vaovao ity. Ny fandefasana haitao vaovao dia sarotra hatrany. Saika ny ampahatelon'ny mpitarika ny raharaham-barotra any Angletera dia miaiky fa ny olany dia manjary rehefa miresaka teknolojia vaovao, hoy ny TomTom Telematics 'Senior Managers Study, izay natao tamin'ny Jona 2017 - Telegraph.
Mba hananana fiainana mahomby, saina misokatra amin'ny soso-kevitra sy hevitra vaovao miakatra hatrany amin'ny tohatra. Toy izany koa ny orinasa sy ny indostria, miharihary fa ny orinasam-pikarohana teknolojia vaovao dia niroborobo taloha. Noho izany, raha ny fahitako azy, ny indostria tsirairay sy ny mpandraharaha rehetra dia tokony hieritreritra ny handraisana ny teknolojia vaovao amin'ny asan'ny tena manokana. Ny fakan-tsary mihetsika amin'ny alàlan'ny vatana dia teknolojia misondrotra ary afaka manaporofo izy ireo fa ilaina amin'ny indostria maoderina sy mahazatra.
Fakan-tsary sy fambolena vita amin'ny vatana:
Ny fakan-tsary misy vatana dia azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fiainana izay misy fifandraisan'ny olombelona. Isan'ny iray amin'izy ireo koa ny fambolena. Ny asa fambolena dia manana asa tena ilaina amin'ny fiainana ara-toekarena. Izy io no fototry ny rafitra ara-bola. Ny fiantrana dia manome sakafo sy sakafo mivaingana ary koa ny varotra amin'ny raharaham-barotra amin'ny fiveloman'ny mponina.
Ankehitriny, ny fanontaniana hoe ahoana no ahafahan'ny fakan-tsary mifono vatana manampy ny tantsaha eto amintsika? Tazana fa misy tantsaha maro marary na naratra rehefa miasa toeram-piompiana. Ireo ratra ireo dia mety hateraky ny allergy na fihenan'ny otrikaina na mety hateraky ny fanafihana biby masiaka.
Araka ny iray tatitra avy amin'ny Centers for control control and prevention (CDC), any 2014, tanora 12,000 tombanana dia naratra tao amin'ny toeram-piompiana; 4,000 amin'ireto ratra ireto dia vokatry ny asa tany amin'ny toeram-piompiana. Ankehitriny, ireo ratra na ireo fahafatesan'ny tantsaha tanora aza dia azo nosakanana raha nampiasaina ny teknolojia mety tamin'izany. Nametraka fakan-tsary miakanjoam-paty eo amin'ny tratran'ny tantsaha dia hanome azy ireo antoka, fa ny havany ao an-trano no mijery azy. Raha misy tranga tsy fantatra na mampalahelo dia mitranga, dia afaka tonga hamonjy azy ireo amin'ny fotoana. Azo antoka fa hampihena ny antony mahatonga izany.
Ny fambolena sasany dia takiana amin'ny rano, amin'ny andro alina, tsy mahatsiaro ho tonga soa aman-tsara any an-tsaha ny tantsaha satria ny fandrahonan'ny biby masiaka dia miditra ao an-dohany. Raha fantatr'izy ireo anefa dia manara-maso izy ireo ary misy ny tsy fahatomombanana rehetra holazaina avy hatrany, tsy hisalasala handeha irery izy ireo amin'ny alina.
Ny fakan-tsary miakanjoana dia afaka manampy ny mpampiasa ny tantsaha mijery tsara ny fomba fiasan'izy ireo sy hitazomana hatrany ny fivoaran'izy ireo ary koa ny fampitomboana ny vokatra sy ny fitomboany.
Fakan-tsary sy fitrandrahana vita amin'ny vatana:
Mahagaga ny metaly sy ny mineraly izay ianteherantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Mandritra ny fotoana tsy ampoizinao fa miato kely mandritra ny iray minitra mba handinihana azy dia, mitsangàna manodidina hijery ny entana ampidirina amin'ny alalàn'ny zavamaniry. Avy amin'ny simenitra mandehandeha mankany amin'ny efijery izay vakianao izao, ny zava-misy sy ny fiainantsika miankina amin'ny vokatry ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao.
Ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia mamono olona ary manimba olona marobe noho ny asa rehetra eto ambonin'ny planeta. Maherin'ny 15,000 ireo mpitrandraka maty novonoina isan-taona - ary io ihany no isan'ny maty ofisialy. Amin'ny mety rehetra dia mihoatra izany. Misy fomba maro hisorohana ireo karazana hetsika ireo. Iray amin'izany ny fampiasana fakan-tsary mitafy vatana, afaka manampy amin'ny fanaraha-maso ny olona any an-toerana izy io hahafantatra raha hisy ny loza mahatsiravina atsy ho atsy.
Ireo cams amin'ny vatana manokana ity izay afaka manome renirano avo amin'ny toerana maizim-pito ety ambanin'ny tany dia afaka mitana andraikitra lehibe hisorohana ireo karazana tranga toy izany. Raha misy nambara mialoha, ny mpitrandraka dia afaka mampandre ireo lasy ao ambadiky ny fanaraha-maso handefasana ekipa manavotra. Fantatra ihany koa fa maty ireo mpitrandraka noho ny faharerahana, ireo cams amin'ny vatana manokana ireo dia miaraka amina mpanara-maso setroka izay hanaitra ny ekipa mpamonjy voina, ka mahavonjy ny mpitrandraka ara-potoana.
Raha fintinina, azontsika atao ny milaza fa ny cams vita amin'ny vatana dia ampahany tena ilaina amin'ny fiarovana ny mpitrandraka ary tokony ho ampahany amin'ny fitaovam-pitrandrahana ataon'izy ireo izy ireo. Ny fanaovana izany fitandremana izany dia tena hanampy amin'ny fampihenana ny isan'ny antony mahatonga izany raha ampitahaina amin'ny habetsahana hita tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay.
Fakan-tsary sy fananganana vatana:
Ny olana lehibe atrehantsika ankehitriny dia ny tsy fahafaham-po ny olona amin'ny fampivoarana azy. Mino izy ireo fa mandany fotoana bebe kokoa noho ny fanaovana asa ny olona. Ny fametrahana fakan-tsary mifono vatan-tarehy eo amin'ny tratran'ny mpanamboatra dia afaka manome maso azy ireo hanambina ny mpanamboatra azy. Ireo toerana fananganana dia azo jerena isaky ny sakan'ny tanàna roa misy mponina izay manambara ny haben'ny tombontsoa amin'ity vokatra ity. Ny mpiantoka iray na tompona tompona iray dia afaka manara-maso ny hetsika sy ny fampisehoana an-tanana amin'ny fampiasana ity fitaovana ity.
Ny fametrahana ireo fitaovana ireo amin'ny mpiasa dia hitazomana azy ireo hanao asa satria fantatr'izy ireo fa manara-maso akaiky azy ireo ny mpifaninana. Hanome ny tsara indrindra amin'ny asany izy ireo, satria fototry ny olombelona ny maha-olona antsika dia mahafantatra isika fa misy olona mijery antsika ary rehefa misy olona mpampiasa anao, dia atahorana ho very asa ianao; Ho hita ny valin'ny 100%.
Ny tombony lehibe hafa azon'ireo fakan-tsary vita amin'ny vatana amin'ny indostrian'ny fananganana dia raha misy olona naratra mandritra ny dingana fanamboarana, dia afaka omena azy ny fanampiana sy fanafody sahaza azy satria misy olona any amin'ny ilany hafa dia hampahafantarina eo noho eo hetsika. Noho izany, afaka milaza isika fa ny fakan-tsary niakanjo vatana tsy vitan'ny hoe manome fepetra fiarovana anao fa ny baiko fitantanana ihany koa. Noho izany dia miharihary fa ny fakan-tsary natao tamin'ny vatana dia tokony ho ampahany amin'ny orinasam-pananganana vaovao ary koa ilay taloha.
Fakan-tsary sy fanamboarana vatana:
Tsy fantatra loatra ny orinasa mpamokatra. Na izany aza, ity indostria ity dia manan-danja lehibe amin'ny fandrosoan'ny harinkarena miakatra sy ny tsena noforonina. Na dia tsy valiny amin'ny olana rehetra aza ny famokarana, indostria mpamorona sary an-tsaina sy manavao izay mamorona vohana maro ho an'ny asa. Ireto fanokafana asa ireto dia feno olona ary mila arahi-maso ireo olona ireo mba hamoronana tontolon'ny asa tsara kokoa.
Andao atao hoe mamboly singa famokarana tekstil ianao. Ahoana no ahalalanao fa manao ny asany araka ny tokony ho izy ny mpiasa, fa tokony hamboly fomban-damba misy vatan'ora eo an-tratrany ianao. Hanampy anao hanatsara ny vokatrao sy ny tombotsoanao izany.
Ny tombony hafa amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mifono vatan'olona amin'ny tokana mpanamboatra dia manampy amin'ny fihazonana fifandraisana tsara sy salama eo amin'ny mpiasa. Fantatr'izy ireo fa arahi-maso izy ireo, noho izany dia tsy miady amin'ny zavatra madinidinika izay zavatra mahazatra amin'ny olona ao amin'ny vondrona famokarana izy ireo (noho ny fahazarana manaitaitra azy ireo). Tsikaritra fa vitsy ny ady mitranga any amin'ireo orinasa mpamokatra izay ametrahana ny cams amin'ny vatana fa tsy amin'ny toerana tsy ametrahana azy. Noho izany, afaka milaza isika fa ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia lasa ampahany manan-danja amin'ny indostrian'ny famokarana. Tsy dia lavitra izany vanim-potoana izany raha ho an'ny cams amin'ny vatana ny mpiasa tsirairay avy amin'ny vondrona tsirairay.
Fakan-tsary sy fitaterana vita amin'ny vatana:
Ireo fakantsary raikitra fanatanjahantena na koa cams hafa dia efa mpilalao fototra hatrany amin'ny fiarovana rehefa tonga amin'ny sehatry ny fitaterana. Manampy anao hampandeha ireo zava-mitranga mivantana mitranga eny an-dàlana izy ireo. Raha toa ka mitantana orinasa fitaterana ianao, dia mila mampiasa ity teknolojia ity. Apetraho amin'ny fatran'ny mpiasa ny fakan-tsary mitafotafo, hahalala ny fomba itondrany sy ny fihetsik'izy ireo eny an-dalana. Ahoana ny fomba itondrany ny mpanjifa sarobidy, izany hoe mpandeha?
Inona no mahasoa ireo cams vita amin'ny vatana raha ampiasainao any amin'ny sehatry ny fitaterana? Eny ary, voalohany indrindra, hitandrina ny làlan-kalehan'ny mpamily ianao, izay azo atao koa miaraka amin'ny GPS, tsy isalasalana, fa amin'ity fomba ity, mahazo famahanana velona ianao. Ny tombony faharoa azoko jerena amin'ny fampiasana ireto cams ireto dia; raha sendra misy tranga tsy ampoizina dia afaka mandefa ekipa mpamonjy fotoana ianao hamonjy ny ain'izy ireo. Izy io dia hanome haino aman-jery izay azonao atao manadihady any aoriana mba hidirana izay diso izay nahatonga ny hetsika mahatsiravina.
Ny fakan-tsary niakanjo hipetraka teny an-tratran'ny mpamily na ny mpitondra mitondra no mahazo tombony amin'ny andaniny sy ny mpandeha ary ny mpamily. Ny mpandeha iray dia hahafantatra fa misy olona any amin'ny faran'ny iray dia mijery ny famahanana ary izy dia manara-maso, izay hahatonga ny fihetsik'izy ireo ho tsara amin'ilay mitondra azy na mpamily bus. Faharoa, ny mpandeha dia hahatsapa antoka fa tsy afaka hanao fahadisoana ireo mpamily ireo raha ny fahitan'ny mpampiasa azy hatrany. Ity farany dia hiteraka fifandraisana mahomby eo amin'ny mpandeha sy ny mpiasan'ny fitaterana hafa.
Fakan-tsary sy serasera vita amin'ny vatana:
Ny fakantsary raikitra amin'ny vatana dia tsy voafetra amin'ny saha sasany, izy ireo koa fanalahidy lehibe amin'ny fampandehanana ny serivisy serivisy serasera. Raha toa ka manao karazana asa toy izany ianao, dia hisy mpangataka mpanohana ny mpanjifa ary ho avy isan'andro ny olona hividy ny vokatrao. Tsara kokoa ny manana fakan-tsary mihetsika ao amin'ny tratran'ny mpanohana izay notendrenao tany. Ny fikarakarana kalitaon'io tompon'andraikitra io dia azo karakaraina amin'ity tranga ity. Noho ny fahafantarako fa ny mpampiasa ahy dia manara-maso ny fifandraisako sy ny fihetsiko amin'ny mpanjifa, dia azo antoka fa hanome ny 100 isan-jatony izy. Azo antoka fa hanao marika eo amin'ny tsena ianao ary ho valin'ny tombom-barotra marobe.
Fakan-tsary sy serivisy vita amin'ny vatana:
Ny fiasana any amin'ny orinasan'ny mpanome tolotra rehetra, ny fanohanana sy fikarakarana ny mpanjifa no dingana fototra indrindra amin'izany orinasa izany. Ny fametrahana ny fahatokisan-tena eo amin'ny mpanjifa sy ny maso ivoho mpanohana anao dia adidinao (raha mitantana orinasa mpanome tolotra) ianao. Misy fomba maro ahafahana miantoka fa ny mpanjifanao dia tena mahazo izay ilainy toy ny valiny avy amin'ireo mpanjifa, saingy tsy aleo ve ny mahita izany amin'ny masonao fa mahazo ny fanohanana sy fikarakarana mety ny mpanjifa rehetra. Mba hikarohana izany, dia ilaina ny fakantsary vita amin'ny vatana.
Misy tombony roa amin'ny fampiasana cams vita amin'ny vatana raha mpanolotra herinaratra ianao. Ny iray, araka ny efa noresahina teo aloha dia hiantoka ny kalitaon'ny fanohanan'ny mpanjifanao. A fanadihadiana dia natao tany 2012, izay ny valiny dia mampiseho fa ny 33% ny Amerikanina dia nilaza fa handinika ireo orinasa mifindra izy ireo aorian'ny fanaovana asa fanompoana tsy fahita firy fotsiny. hafa famoahana nilaza fa ny orinasa amerikanina dia very $ 62 miliara isan-taona noho ny serivisy mpanjifa mahantra. Ny zava-dehibe faharoa dia ny hiantoka ny fiarovana ny ain'ny zon'ny olona (any amin'ny firenena izay naorina ny tamba-jotra misokatra).
Toy ny mpamatsy herinaratra, ny orinasa mpamatsy angovo dia afaka mampiasa cams vita amin'ny vatana ihany koa.
Ireo olona nidina ambanin'ny tany mba hahazoana antoka tsara ny fivoaky ny fantsom-bolan'ny mpanjaitra matetika dia tratra amin'ny toe-javatra henjana. Ny fametavetana no tena antony mahafaty amin'ny tranga toy izany. Raha mpiasan'ny vatam-paty ireo mpiasa ireo dia azo nosakanana ny fametahana toy izany. Ny olona any amin'ny lafiny hafa hanara-maso ny zava-misy dia afaka mandefa ekipa mpamonjy fotoana mba hamonjy aina.
Ny fanadihadiana nataon'ny Safai Karmachari Andolan (SKA), ankoatry ny maha-fiankinan'ny tsy zotom-pon'olombelona azy taloha, dia namoy ny 1327 tao anatin'ny taona maromaro izay. Raha ny antontam-baovao avy amin'ny fanadihadiana dia nandrakitra an-tsoratra manodidina ny fahazavana 250 tamin'ny famonoana mahafaty ny tamn'i Tamil Nadu nandritra ny roa taona lasa izay, izay akaiky ny ampahatelony na ny 84 no maty ary manodidina an'i Chennai.
Fakan-tsary miakanjo sy varotra varotra bolo:
Ny fivarotana dia karazana fifanakalozana izay hahazoana ny varotra sy amidy amin'ny vola be sy amidy, amina ampaham-bola nomenaina, amin'ireo mpiara-miasa, mpanjifa mahay na fivoriambe, na dia tsy mety ho mpanjifa miavaka aza. Ireo karazana fifanakalozana ireo dia tokony harahi-maso mba hitazomana ny tontolo iainana miasa sy ny fahatokisan'ny mpivarotra.
Noho izany, ny fampiasana fakan-tsary mifono vatan-dehilahy amin'ny indostria ity dia manome fototry ny ho avy vaovao izay misy ny fitaterana sy ny fivoriana rehetra.
Fakan-tsary miakanjo vatana sy varotra varotra:
Ny asa fivarotana varotra dia midika ny fivarotana entana amin'ny mpanjifa miavaka izay mpampiasa ny vokatra isan'andro. Ny fakantsary vita amin'ny vatana ihany koa dia ilaina amin'ny orinasa ity mba hiantohana ny serivisy kalitao sy ny fivezivezena tsara.
Andao atao hoe mihazona fivarotana fivarotana ianao, mila fantatrao fa miasa amin'ny fahafoizan-tena tanteraka ny mpiasa ataonao ary matihanina ny fihetsik'izy ireo amin'ny mpanjifa. Afaka milaza isika fa ity teknolojia kofehy ity no lakilen'ny fahombiazan'ny orinasanao.
Fakan-tsary sy fitantanam-bola, fiantohana ary trano fonenana:
Ny fakan-tsary miaro ny vatana dia mitondra betsaka ihany koa amin'ny orinasan-tserasera toy ny ara-bola, ny fiantohana sy ny orinasa findramana. Ireo orinasa rehetra ireo dia mitaky firaketana ireo fifanarahana voasoratra sy am-bava. Ireo cams ireo dia manome fanampiana lehibe hanara-maso ireo raki-tsoratra ireo.
Raha mpandraharaha fiantohana ianao dia tokony hisy fakan-tsary miakatra aminao izay hanome ny lafin'ny orinasanao. Ho fantatry ny mpanjifa fa io orinasa io dia manara-maso ny zava-drehetra izay hiafara amin'ny fanaovana sary tsara sy marina ao amin'ny sain'ny mpanjifa.
Ny fananana tranokala tena misy dia mandeha, fakantsary vita amin'ny vatana no hitazomana ny fifampiraharahanao izay mety hanampy anao raha misy andaniny amin'ny varotra dia manandrana miala amin'ny fifanarahana iray.
Fakan-tsary miakanjo vatana sy fampiharana ny lalàna:
Hita fa ny zana-tany dia azo tanterahina tsikelikely amin'ny torolàlana ofisialy mandritra ny fihaonana. Manova ny fitondran-tenany matetika ny mponina rehefa mahatsapa fa voarakitra an-tsoratra. Manampy ny fepetra takian'ny lalàna izany mba hipetraka amin'ny fomba mandaitra ny traikefa ambany fa tsy hiakatra am-pieritreretana izay tena ilaina ny fampiasana herinaratra.
Ny fakan-tsary vita amin'ny vatana dia mety hitondra fahatsorana sy andraikitra tsara kokoa, ary amin'izany fomba izany, dia manampy sy manatsara ny fampiharana ny lalàna. Tsikaritra fa amin'ny tambajotra marobe dia misy ny tsy fahatokisan-tena eo amin'ny olona eo an-toerana sy ny fikambanana mpahazo lalana amin'ny lalàna. Manelingelina ny tsy fahatokisan-tena raha misy ny fanontaniana momba ny fampiasana hery mampidi-doza na tsy dia mahafaty. Ny horonantsary horonantsary tratra nandritra ireo fikambanan'ny tambajotra ofisialy ireo dia mety hanome dokotera tsara kokoa hanampiana ny fanamafisana ny hevitry ny fotoana sy ny firaketana an-tsokosoko izay nohazavain'ny manampahefana sy ny mponina ao amin'ny tambajotra.
Satria ireo fiasa rehetra voalaza etsy ambony ireo dia manasongadina ny vokany tsara amin'ny fampiasana fakan-tsary mitafy vatana ho an'ny polisy sy fampiharana fampiharana lalàna, ny fakantsary mihitsy aza dia tsy tokony horaisina ho 'bala majika'. Ny fakan-tsary mitafy vatana dia iray amin'ireo fitaovana maro azo ampiasaina amin'ny rafitry ny polisy maoderina mba hanatsarana ny fahombiazana sy ny fiarovana.
Mba hamaranana ny lafiny rehetra resahina etsy ambony, dia afaka milaza isika fa ny fakan-tsary mifono vatana dia singa manan-danja amin'ny orinasan'ny ankehitriny. Ny fampiasana fakan-tsary amin'ny vatana amin'ny indostria isan-karazany dia ilaina amin'ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny firenena iray. Ankehitriny, hita ao amin'ny departemantan'ny polisy sy ny miaramila ny fampiasa amin'ny fakantsary fiadiana amin'ny vatana fa io lahatsoratra io dia nanala ny foto-kevitra rehetra fa anjara toerana lehibe amin'ny orinasa rehetra izy io.
Zava-dehibe ihany koa ny mitana ny firaketana an-tsoratra ny lafiny lafin'ny tsiambaratelo ary manamafy ny fampiasana azy amin'ny orinasa tsirairay. Miharihary fa ny fipoahan'ny teknolojia vaovao sy ny tambajotra sosialy dia nanova ny fomba fiheveran'ny olona ny fiainany manokana, fa ny fakana sary nataon'ny fakan-tsary mihetsika amin'ny fantsom-batana dia mety mamela ny fampiasana ny teknolojia fankatoavana ny tarehy.
Ny fampiasana fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia manome fahafahana ho an'ireo manamboninahitra mba handraisana an-tsoratra ny toe-javatra mampihetsi-po, fa koa amin'ny firaketana an-trano ao anaty trano tsy miankina rehefa hisambotra na hanao fikarohana. Mikasika izay dia nisy ny sampan-draharahan'ny fampiharana ny lalàna naka ny toeran'ny tompon'andraikitra manana fahefana an-tsoratra ao anaty trano tsy miankina raha toa ka manana zo ara-dalàna izy ireo. Izany, vokatr'izany dia manelingelina ny fiainana manokan'ny olona maro izay tsy tsara amin'ny polisy. Tsy tokony hampandefitra ny fiainana manokana ny olona.
Fampiasana fakantsary ala amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny indostria no farany niova: Desambra 5th, 2019 by Admin
4479 Total Views 2 Views Today